Fepetra sy fepetra - Vaomieran'ny atody iraisam-pirenena
Fepetra famandrihana ho an'ny fihaonambe
Ny famandrihana momba ny fihaonambe dia atao miaraka amin'ny International Egg Conference Conference any Guernsey.
Md Peter Port
Orinasa No: 55741
Ny fandoavam-bola, raha tsy vita amin'ny carte de crédit amin'ny fotoana anaovana famandrihana, dia takiana na ao anatin'ny 30 andro aorian'ny datin'ny invoice na alohan'ny hanombohan'ny federasiona, iza no ho haingana.
Ho voamarina ihany ny fandraisanao anjara raha nahazo ny vola feno isika.
Tsy azo averina ny saram-pivoriana. Na izany aza, raha mila manafoana ny toeranao ianao dia hivoaka ny naoty iray izay manan-kery manoloana ny fivorian'ny federasiona ho avy mandritra ny 12 volana, raha manome ny fanafoanana dia mahazo roa herinandro farafahakeliny manomboka ny fiandohan'ny federasiona. Azo afindra amin'ny solontena hafa ihany koa ny saram-pivoriana.
Politika amin'ny vidiny
Tsy tafiditra ny trano fandraisam-bahiny ary tsy maintsy apetraka misaraka.
Ny fihaonambe dia natao hanatrika feno sy tsy ahafahantsika manome fihenam-bidy ho an'ny fandraisana anjara.
Manohana am-pireharehana ny IEC